Madheshvani : The voice of Madhesh - सरकारले प्रदेश २ मा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य टोली पठायो
सरकारले प्रदेश २ मा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य टोली पठायो
काठमाडौं, १८ साउन । केन्द्र सरकारले कोरोना महामारी फैलिएको प्रदेश २ मा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य टोली पठाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्र रमण सिंहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली प्रदेश २ को वीरगञ्ज पठाइएको हो ।
पछिल्लो समयमा वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या अत्यधिक देखिएको छ । यहाँ साउन महिनामा मात्र १० जना भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार आवश्यकता परेमा अन्य ठाउँमा पनि उच्च स्तरीय टोली पठाइनेछ ।